Barcelona oo wadnaha farta ku heysa kahor kulanka Valencia ee horyaalka La Liga – Gool FM
Barcelona oo wadnaha farta ku heysa kahor kulanka Valencia ee horyaalka La Liga
(Barcelona) 08 Sebt 2019. Kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa wadnaha farta ku heysa kahor kulanka ay kula ciyaari doonaan Valencia horyaalka La Liga ee dalka Spain.
Daafaca kooxda Barcelona ee Nélson Semedo ayaa ka baxay garoonka kulankii ay xalay wada ciyaareen xulalka Portugal iyo Serbia, kaddib markii uu soo gaaray dhaawac u muuqday inuu yahay mid aad u daran.
Xulka qaranka Portugal ayaa guul 4-2 ah kaga gaaray dhigooda Serbia ciyaar ka tirsaneyd kulamada isreeb-reebka koobka Euro 2020.
Daqiiqadii 65-aad Nélson Semedo ayaa ku dhacay gudaha garoonka kaddib markii ay isku dheceen xiddig ka tirsan xulka qaranka Serbia, wuxuuna awoodi waayay inuu ciyaarta sii wato.
Macalinka xulka qaranka Portugal ee Fernando Santos ayaa kaddib marka uu Nélson Semedo ka baxay garoonka wuxuu ku qasbanaaday in badalkiisa uu keensado, daafaca garabka midig kooxda Manchester City ee João Cancelo.
Nélson Semedo ayaa ku biiray liiska dhaawacyada kooxda Barcelona oo ay sidoo kale ka mid yihiin xiddigaha Lionel Messi, Samuel Umtiti, Luis Suarez, Ousmane Dembélé, taasoo ka dhigeysa in xaalada naadiga reer Catalonia ay tahay mid aad u adag kahor kulnka Valencia.
Busquets oo ka warbixiyay waxa ka dhiman Frenkie de Jong si uu ula qabsado Barcelona
Ronaldo oo RIKOOR taariikhi ah ka sameeyay xulkiisa qaranka Portugal (Wuxuu noqday laacibkii ugu horeeyay ee ……!!)